Unique Different Self vakadengezera Scooters - Jomo Technology Co., Ltd
Unique Different Self vakadengezera Scooters
The mannequin kuva akatsunga sezvo paminiti kunaka injini. Hongu, zviri kuenda mutengo iwe mari yakawanda, zvisinei Tikatarisa pakuvaka, uye kungoitira unhu kuvaka mukomana uyu ngozi, uri kuruboshwe kushamisika kana icho transformer pakavanda. Nyore rechargeable, nyore kudzora kunyange izvi kwatiri vasingaiti rwendo munhu skateboard kana Electric longboard, Achiponesa peturu mari, kushandisa mano remotes, chii kuti kwete kuda pamusoro zvinhu izvi? Zvichaita kuti vhiri kuti kuruka zvakasununguka uye kwaigona kuguma kukuvadza kuzvida yako kana kukuvara nyaya kumativi iwe. Nemavhiri maviri vane rakasimba muviri pakati pavo apo mumwe anogona kuwana yakamira nzvimbo. Yakaomarara vangave yokufambisa anorovera munzira. Vane murimi magadzirirwo anobvumidza zvakawanda ibvi nzvimbo uye gozvo zvakanaka, anokurumidza kujoina bhatiri rongedza, chinjika chigaro kureba uye kuponjesa-uchapupu matai. Zvinofadza, kutya kwangu kuti hombe makambani novimba vakawanda kugadzira vaizoona chii ndingava ndaona putsa pakubuda ruzivo kunge nekusimba groundless. Tingaedza pamusoro ose mangwanani Danho zvikanganiso uye ona kana zviri kunyange kukoshesa nguva yedu kutsvakurudza nayo dzokuwedzera.
Mafungiro edu tsanangura zvomene-upenyu zvakaitika musi mapuranga chaidzo - Koowheel Smart Balance Wheel K8 zvinobatsira chaizvo uye akachenjera nokuti vashomashoma uye yakagadzirirwa muMilan, zviri pakutanga EU musika customized. Kudivi rimwe, Yakavanzwa Bata design, nyore vakatapwa; Ukuwo, kubvisa mugwagwa vhiri design, abate nyore meso pakati avhareji womuenzaniso. Uyezve, zviri tetepa uye chiedza uremu.
Pane zvakawanda siyana velocity controllers, pamwe nezvaanogona chaizvo zvakasiyana. The braking uye kumhanyisa zvinogonawo kuva zvishoma usimbe; zvinosiririsa vatasvi havagoni akamedura kana rikurumidze apo akatendeuka ari nzira nzira vhiri uye injini kurasikirwa traction curtailing kugona kwako kunetesa uye velocity kumusoro. Asi Koowheel yemagetsi hoverboard K8 yakakosha, nokuti Max nokukurumidza ndiyo 10km / h, kana injini yacho nokukurumidza chinosvika marongerwe yambiro kumhanya 10km / h, nyevero bhaza okuzvidzivirira; kana pazasi sipidhi inodiwa (kuisa ukoshi: 10km / h), yambiro bhaza haaiti aramu. Saka chaizvo vakachengeteka zvichienzaniswa nevamwe vanhuwo Scooters. Haufaniri kunetseka zvokutadza zvakasimba braking panguva yakakodzera.
Chaizvoizvo mumwe zvose muchimiro uye zvakadaro anotasva zvakanaka! Kutanga rwendo wako zvose zviri kunofanira kuita kubuda mberi netsoka mumwe uye kutarisira akatungamirira chiedza iri mukuru muchina kupenya. Nokuda kwechikonzero ichi yemakambani siyana pamusoro kumusika vangosarudza kuvaka kuzvida BALANCInG sikuta . Usati kuona sei yemagetsi skateboardmabasa, unofanira kunzwisisa zvauri kushandisa kuti. Pamusoro penyika, kuti haangaoni chaizvoizvo kuva paradigm pamwe muhombe pamwero yokugara kushandiswa 3-D Tech. Print zvenhau achaparadzwa zvishandiswezve, hapana mubvunzo zvakakodzera mumba uyewo munharaunda. The dzichimhanya zvazvinoita, nani kuramba takatsiga; ari nomumugwagwa kwaitora nguva isu tiende, izvozvo ichichinja yakawanda yakaoma zvikuru kuramba takadzikama. Zvisinei, rokumusoro riri voltage ukamhanya, kuti costlier zvichaita kuwana. Izvi zvinoreva kuti chigadzirwa aenda vachishandisa hurumende-inodzorwa kuchengeteka nekuongororwa, kunyatsoongorora zvemagetsi uye matochi, mundiro zvirongwa uye vaudzewo kuva akachengeteka.
Post nguva: Jan-12-2018